3က G / 4, G စက်ပစ္စည်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Mobile broadband device of 2G 3G 4G Card driver & Software များ , windows win 98 xp vista78 32bit 64bit , linux , Apple iOS
Intel® Wireless Bluetooth® is recommended for end users, Bluetooth®နည်းပညာနှင့်အတူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်. Apple ကမော်ဒယ် : install လုပ်နည်း Intel ကဘလူးတုသ်စီးရီး […]
Novatel E371 E362 EU850D 3G WWAN WLAN ကြိုးမဲ့ WIFI Card ကို Module ယာဉ်မောင်းပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုပ်
စက်တင်ဘာလ 11, 2018 မောင်းသူ 3
Novatel Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ Novatel ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: Novatel E371 E362 EU850D All of drivers are […]
Sierra MC8795V 3G WWAN WLAN ကြိုးမဲ့ WIFI Card ကို Module ယာဉ်မောင်းပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုပ်
နိုဝင်ဘာလ 26, 2014 မောင်းသူ 0
Sierra Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with Sierra software. device ကိုမော်ဒယ်: Sierra MC8795V All of drivers are not support […]
Sierra Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with Sierra software. device ကိုမော်ဒယ်: Sierra MC8790 All of drivers are not support […]
Sierra Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with Sierra software. device ကိုမော်ဒယ်: Sierra MC8780 All of drivers are not support […]
Sierra Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with Sierra software. device ကိုမော်ဒယ်: Sierra MC8755 All of drivers are not support […]
နိုဝင်ဘာလ 25, 2014 မောင်းသူ 0
Sierra Series Driver Support: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with Sierra software. device ကိုမော်ဒယ်: Sierra MC8765 All of drivers are not support […]
ဆောင်းပါး Category: Select လုပ်ပါ မောင်းသူ(204) 3က G / 4, G စက်ပစ္စည်း(41) လြှောကျလှာ(6) တီဗီ Card ကို(17) ဗီဒီယိုကဒ်(20) ကြိုးမဲ့စက်(120) OS ကို-STORE(234) အသက်(92) သတင်း(33) အခြား(45) ပရိုမိုးရှင်း(33) နည်းပညာ(60) အသုံးပြုသူကို manual(6) OSGEAR ပံ့ပိုးမှု(20) networks(9) သိုလှောင်ခြင်း(11) ထုတ်ကုန်များ(591) 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို(16) Apple က iPhone ကိုအိုင်ပက်, iPod(18) ကင်မရာ & အစိတ်အပိုင်းများ(10) ကွန်ပျူတာ(115) CPU ကိုပရို(157) အီလက်ထရောနစ်(14) IC Chipset(2) မိုဘိုင်းဖုန်း(248) လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များ(12) တက်ဘလက်ပီစီကွန်ပျူတာ(40)
Software များ 64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Technology_Internet HTC က ပရိုဆက်ဆာ ဥပဒေရေးရာအနက် မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ HD Graphics ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung က device ကိုမော်ဒယ် Nokia က Intel က စီပီယူ OS ကို-STORE processor ​​ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်
ပရိုဆက်ဆာ HTC က Software များ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် Intel က Server ကို စမတ်ဖုန်းများ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Sony Ericsson က Samsung ရဲ့ Galaxy processor ​​ကို စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု နည်းပညာ Qualcomm မှ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က OS ကို-STORE Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ် Intel က Technology_Internet